အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်း ခပ်လန်းလန်းဖိနပ်များ
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Thursday, October 06, 2011 Thursday, October 06, 2011 Labels: ထူးဆန်းထွေလာ
ကမ္ဘာပေါ်က ထူးထူးခြားခြား ဆန်းပြားလှတဲ့ ဖိနပ် ဒီဇိုင်းများကို ဖော်ပြရရင်
ဒီရက်ပိုင်း အလုပ်ရှုပ်ပြီး စာတွေလည်း လိုက်မဖတ်နိုင်၊ စာအသစ်လည်း မရေးနိုင်သေးတာကြောင့် ပုံတွေချည်းတင်လိုက်တာ ခွင့်လွှတ်ပါလို့ အနူးအညွှတ် ပန်ကြားပါတယ်ရှင်။ အားလုံး ရွှင်လန်း စိတ်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့
27 Responses to “ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်း ခပ်လန်းလန်းဖိနပ်များ”
ထူးဆန်းအံ့ဖွယ် ဖိနပ်ပေါင်းစုံ စတ်ဝင်စားစရာပဲ ချောရေ။
ပေါင်မုန့်စားမလို့ လုပ်တုန်း စားချင်တော့ဘူးး)
ပုံတွေအကုန် မြင်ရဘူး ချောရေ ...
ဖိနပ်ဒီဇိုင်းတွေက အံ့သြကုန်နိုင်ဖွယ် လန်ထွက်နေတာပဲ။
မမေကတော့ ကတ္တီပါ ညှပ်ဖိနပ်ပါးလေးပဲ စီးပါတော့မယ်။ အဲဒါကြီးတွေတော့ ကြိုက်ဖူး :))
အမလေးချောချောရယ် တောင်းပန်နေသေးတယ် ဒီပုံတွေစုဆောင်းရ တင်ရတာ လွယ်တယ်မှတ်လို့...အချိန်တော်တော်ပေးရမှာ... ကိုယ်က ဖိနပ်ခရေဇီမို့ စုံစုံစိစိလာကြည့်သွားတယ်...။ ဖန်ဖိနပ်လေးတော့ စီးကြည့်ချင်တယ် ငယ်ငယ်ကစင်ဒရဲလား ကာတွန်းထဲက မင်းသမီးလိုလေ...။ ဒေါက်ကျိုးမှာ ပဲကြောက်ရတယ်..။
ခုံဖိနပ်ကော ပါဝူးလားရှင့် ဟီးး
အပေါ်ဆုံးက ဆူးဖိနပ်နဲ့ ရန်ကုန်မှာ ကားတိုးစီးရင် တော့ လူတွေက ဖယ်ပေးကြမှာ သေချာတယ်၊း) အများစုကတော့ လမ်းလျှောက်ရတာ သက်သာမယ် မထင်ဘူးနော်၊ ဒီလောက် အများကြီး တစုတစည်းထဲ မတွေ့ဖူးသေးဘူး ဗျ၊ မချောက တကယ်ပဲ အချိန်ပေး၊ စုဆောင်းထားတာ ပေကိုး..၊း) ကျေးဇူးပါဗျာ...။
လန်းလွန်းလို့ မစီးတော့ပါဘူးနော် :P
တစ်ချို့ပုံတွေ မမြင်ရဘူးနော် မချော။ အပေါ်ဆုံးက ဒူးရင်းသီးလို ဖိနပ်လေးမိုက်တယ်။ ပေါင်မုန့်ဖိနပ်ကတော့ ပေါင်မုန့်ပေါ်တက်စီးရသလိုမျိူး အူယားထှာအေ။း)
လေဒီဂါဂါအတွက် လုပ်ထားတဲ့ ဖိနပ်တွေထင်ပါရဲ့
ကိုယ်ကတော့ လေဒီစွာစွာ ဆိုတော့က ဒါမျိုးဖိနပ်စီးဖူးကွယ် :P
ခလုတ်တိုက်လဲနေမှဖြင့် ဒွတ်ခပါ ချောရယ် :P
ငှက်ပျောသီး ဖိနပ်လေးတော့ စီးမိချင်အိ :D
အမငှီးးးး ဆူးဖိနပ်နဲ့ လက်ဝှေ့ဖိနပ်ကိုမြင်ရတာ ကျောချမ်းစရာ... :P
OMG, Chaw, I love d-squared's skeleton shoes and Cristian Louboutin's eye buttoned shoes! Just wish I were rich to buy them!!!Thank you so much for sharing those amazing yet bizarre shoes.
ထွင်လည်းထွင်တတ်ကြပါပေတယ်။ ငှက်ပျောသီးခွံ ဖိနပ်ကတော့ တော်တော် တူတာပဲ။
ဟင့်... မချောဖိနပ်တွေကလဲ မိန်းမစီးတွေ ချည်းဘဲ...
လေဒီဂါဂါရဲ့ အသားဖိနပ်ကတော့ ကြည့်ရင်း အော့ အော့ ဖြစ်မိတယ်။ အဲဒီလို ဖိနပ်စီးသွားလို့ကတော့ အောင်နက်တို့ ဂုတ်ကျားတို့နဲ့ တွေ့ရင် ပြေးရမတာကြံ။း))
ပေါင်မုန့် ၊ ငှက်ပျောသီး၊ အီတလီခေါက်ဆွဲ ဖိနပ်တွေကြည့်ပြီး စားချင်စိတ် ကုန်ခမ်းသွားတယ်။ လေးခွ၊ လက်ဝှေ့ ဖိနပ်ကတော့ လက်စွမ်းပြလို့ ရတာပေါ့။ ကီးဘုတ်ဖိနပ်ကို မြင်တော့ နှိပ်ချင်မိတယ် (အကျင့်ပါနေလို့ ...း) )။ မြက်ဖိနပ်၊ ပန်းလှလှတွေပါတဲ့ ဖိနပ်ကိုတော့ စီးကြည့်ချင်သား။ စင်ဒရဲလားလေးရဲ့ဖန်ဖိနပ်ကိုလည်း စီးကြည့်ချင်တယ်..းD။
စိတ်ဝင်စားစရာပါလား.. တကယ်အသုံးတည့်မတည့်တော့ မသိဘူးနော်.. ချော်မလဲဖို့တော့လိုမယ်...
မစီးရဲပေါင် မမချောရယ် ...တခုမှကြိူက်ဖူး ဟိဟိး)
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ စီးရတာ ခြေထောက်သက်သာမယ့်
လေးဂွ ဖိနပ်ရယ်.. ပန်းဖိနပ်တွေရယ် ကြိုက်တယ်း))
ဖန် ဖိနပ်လေးလည်း ကြိုက်တယ်..
ဘ၀မှာ ဖန်ဖိနပ်လေးတစ်ရံ ပိုင်ချင်ခဲ့ဖူးတယ်.. ၁၂နှစ်လောက်ကပါ..
ဖိနပ်တွေကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဆိုမှ ဒီပို့စ်က ပုံတွေလဲ မမြင်ရပြန်ဘူး။
နောက်နေ့မှ တခေါက်လာထပ်ကြည့်ပါဦးမယ်။း)
အားပါးပါး..... စုံနေတာပါဘဲလား ချောရေ...
အီတလီခေါက်ဆွဲဖိနပ်လေးကို ကြည့်ရင်း တစိမ့်စိမ့် သွားရည်ယိုနေမိတယ်ကွယ်...။ :)
ဒီလို ထူးတထွေလာ ဖိနပ်အမျိုးစုံတွေ ချော ဘယ်လိုရှာထားပါလိမ့်... ကိုယ် ဖိနပ်သိပ်ကြိုက်တဲ့သူ... အူတွေယားသွားတယ်... :-)